प्रेमिकालाई पानी मुनी गएर विवाह प्रस्ताव राख्न खोज्दा प्रेमी ठहरै (भिडियोसहित) – Jagaran Nepal
एजेन्सी । प्रेमिकालाई खतरा मोलेर देखाउने धेरै प्रेमीको चाहना हुन्छ । आफू अत्याधिक प्रेम गर्ने प्रमाणित गर्न पनि यस्तो गर्छन् । एकजना प्रेमीले प्रेमिकालाई पानी मुनी गएर विवाहको प्रस्ताव राख्न खोजे ।
उनी पानी मुनी गए तर जिउँदो फर्किएनन् । यो घटना सन् २०१९ मा तान्जानियाको समुन्द्रमा भएको हो । युवकले विवाह प्रस्ताव लिखित रुपमै राखेका थिए । लेखेर राखेको विवाह प्रस्ताव पानी मुनी पुगेर खुलाए । प्रेमिकाले हेर्न भ्याइन् तर उनको जवाफ प्रेमीले सुन्न र देख्न पाएनन् ।
विवाहको प्रस्ताव राख्दै औठी पनि पानीबाटै देखाएका थिए । प्रेमी प्रेमिकाको विवाह गर्ने सपना चकनाचुर भयो ।अमेरिकी नागरिक स्टेभेन वेवर आफ्नी प्रेमिका केनेसा एन्टोइनको साथमा तान्जानियाको पेम्बा टापु पुगेका थिए । उनीहरु समुन्द्री तट नजिकैको पानीमा केही भाग मात्र डुब्ने काठको क्याबिनमा बसेका थिए ।
वेवर निकै उत्साही भए । प्रेमिकालाई सरप्राइज दिन्छु भने । उनी अचानक पानी भित्र पौडिएर पुगथे ।पानी मुनी पौडिएर हातले लेखेको कागज देखाए । जसको भिडियो बनाए । कागजमा लेखिएको थियो- के तिमी मेरो पत्नी बन्न चाहन्छ्यौ ? मसँग विवाह गछ्र्यौ ?
आफूले प्रेमिकालाई निकै माया गर्ने र विवाहको प्रस्ताव भन्न धेरै समय स्वास रोकिराख्न नसक्ने लेखेका थिए । प्रेमिकालाई अपार माया गर्ने र हरदिन माया गर्ने समेत लेखेका थिए । भिडियो